Ogaden News Agency (ONA) – Taliska Zenawi oo lagu Eedeyay in Sharciga Ethiopia uu jabiyay uuna Diimaha faro galin ku hayo
Taliska Zenawi oo lagu Eedeyay in Sharciga Ethiopia uu jabiyay uuna Diimaha faro galin ku hayo
Posted by ONA Admin	/ June 2, 2012
Waxaa socda muddo 6 bilood ah Banaanbaxyo waaweyn iyo iskahor imaadyo u dhaxeeya Shucuubta Islaamka ah ee Itoobiya iyo taliska EPRDF. Waxaa shucuubta islaamka ah ay ka banaanbaxayaan taliska Ethiopia oo Madhab diin cusub ah ka dhex sameeyay wadankaas.
Hadaba Taliska TPLF ayaa waxaa warbaahinta Caalamku ay aad uga hadashay saameynta ay Dowlada Ethiopia ku leedahay Diimaha. Waxaa Xeerka dastuurka Ethiopia u qoran sheegaya
In Diimaha aysan talisku faragalin ku sameyn karin. Waxaana warbaahinta Al jazeera iyo Christian Sciene ay soo gudbiyeen dad islaam ah oo u dhashay Ethiopia oo la jidh dilayo iyada oo lagu qasbayo innuu diintiisa ka tago oo uu qaato Diinta madhabta Al Ahbash. Arrintaas oo Dowlada Ethiopia eedeymo loogu soo jeediyay in aysan ummada Islaamka ah Diintooda ka badali karin.
madhabtan Al Axbash ayaa ah diin cusub oo ninka sameeyay uu yahay nin u dhashay wadankaas Ethiopia oo iska mala awaalay. Ninkan oo lagu magacabo Abdullah Al Harari oo ka abbuuray madhabtan wadanka Lubnaan. Ayaa waxa ay Taliska TPLF ay soo kaxeysteen madhabta axbash ee Adbullaah al Harari culumadiisa. iyaga oo u dhiibay Masjlic Aclaha Islaamku ku leeyahay Ethiopia maamulkiisa culumada madhabtaasi. Muslimka Ethiopia oo ka badan 50 million ayaa TPLF rabtaa inay ka dhigto dad diintooda sharafta iyo cisada leh ee islaamka ah inay ka saarto.
Waxaa hadda in kabadan 50,000 oo islaam ah lagu qasbay in la xareeyo si loo soo baro Madhabtan Xabash. Si dadkaas ay masaajida Ethiopia ula wareegaan ummada Islaamka ahna ay u baraan madhabtan cusub iyaga oo ka saaraya Diinta. Dadkan ayaa waxaa loo sheegayo ee labararo waxay tahay in Islaamka kale oo dhan yahay billaa diin, qofkii Axbaash qaata kaliyana uu noqonayo qof islaam ah. Dowlada Ethiopia ayaa amar ku bixisay dhamaan Imaamyada masaajida ku yaala Ethiopia oo dhan inay soo xaroodaan oo ay bartaan Madhabtan cusub ee Ethiopia laga hirgalinayo. Isla mar ahaantaasna ay badalaan Diintooda oo ay qaataan madhabtan. Sheekhi ama imaamki diidana waxaa loo taxaabay Xabsiga iyada oo culuma badan oo islaam ah laga dhigay wax la dilay iyo wax la xidhay.
Haddaba Ummada Islaamka ee Ku nool wadanka Ethiopia ayaa arrintan ka dhiidhiyay waxayna goosteen inay ka horyimadaan madhabtan oo Diintooda ay ku dhaggaan kuna dhintaan.
Talisyadi hore Ee Ethiopia Muslimiinta Ethiopia Dhaqan Rogay
Wadanka Ethiopia ayaa ah wadan Ummada Islaamka ah ay dulmi badan ku qabtay. Talisyadii hore ee Abbysinia ayaa markay qabsadaan dhulka Islaamka waxay ku qasbi jireen in ummada Islaamka ah ay ka tagaan Diinta Islaamka oo ay qaataan Diinta Masiixiga ah. Ama ay noqdaan dad cawaan ah oo aan diin heysanin.
Waqtigii Haile Selassie waxaa Ummada islaamka ah lagala daggaalamay dhaqankooda iyada oo Ethiopia laga hirgaliyay dad Muslilm ah balse aan ku dhaqmin diintooda Islaamka oo dhaqan ahaan aan heysan ama ka muuqanin dhaqanka Islaamku.
Waxaana caado aheyd in aad aragto qof aan tukanayn, khamrida cabaya oo u nool sida gaalada Ethiopia. Qof magac gaal leh oo markii aad lasii shekaysato ku dhaha Anigu Muslim baan ahay.
Waxaa dadka laga badali jiray Magacooda iyo dhaqankooda si loogu aqoonsado inu yahay Ethiopian. si uu u helo waxbarasho iyo shaqo iyo nolol.
Culumada Islaamka qaar kamid ah ayaa ku tilmaamay Ethiopia muslimiin aan noolayn.
Balse muddo dhaweyd waxaa dadkii Muslimka Ee Ethiopia bilaabeen inay dhaqankii Diinta Islaamka Kusoo laabtaan. Masaajido aad u badan laga dhiso. dhalinyaradana ay bartaan Diintooda ilaa heerna ay ku dhaqmaan inkasta o Taliska TPLF uu cadaadis badan iyo hagardaamo badan uu ku hayay. Dhalinta Islaamka Ethiopia ayaa ka faa ideystay addunkan casriga ah ee isku furan waxayna diinta kusoo barteen wadamada Dariska ah iyaga muslimiinta Itoobiya ay u shaqo tagaan dhulka barakaysan ee Sucudiga iyo wadamo badan oo carabta ah. Taasna ay u saamaxday inay dhaqankii Diinta Islaamka soo nooleyaan.
Hadaba Islaamka Ethiopia oo haddii si cadaalad ah loo xisaabiyo noqonaya 70% wax ka badan tirada guud ee Ethiopia ayaa markale waxaa laraba in dib loogu celiyo dulinimada.
Zenawi ummada Islaamka ah Diinta kama uu qaadi karo, waana meeshi uu ku guban lahaa.
Madhabtan cusub ayaa dhulka Ogadeniya soo gaadhay waxaana dad tiro ah oo Somali ah ay qaateen madhabta Shiicada. Waxaa caadi noqotay in magaaalada Jig-jiga aad ku aragto nin aad taqanay oo somali ah inuu ku yiraahdo waxaan ahay Shiico. Dadka Somalida Ogadeniya ayaa loo shegay inay shiico tahay madhabtan xabasha.
Ummada Somaliyeed waxaa ku baraarujinayna inay digtoonaadaan iskana ilaaliyaan diintoodana ay ku dhaganaadaan. Sidoo kale Culumada Islaamka ah ee Somaliyeed waa in arrintan ay ka hadlaan. Si looga badbaadiyo ummada Somaliyeed ee Gumeysiga ku hoos nool iyo middii xorta aheyd oo iyana gumeysiga gacanta hoorsaday.